Dhaqanka iyo Hiddaha, 01 August 2014
Khamiis 1 August 2014
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha: #222
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay adeegsiga saxda ah ee erayga af-Soomaaliga, oo si gaar ah uu qoraagu ugu eegayo erayga "Ceel", waxana uu sharxayaa magacyada kala duwan ee ceela iyo in aan baahi loo qabin in "Ceel-biyood" la yiraahdo.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha: #221
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay gabyaagii Cali Faarax oo bilowgii qarnigii hore ku noolaa degaanka Hobyo.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha: #220
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkanna waxaan idiinku haynaa suugaantii la tiriyey xiligii ay Soomaalidu ku jirtay xornimo-doonka iyo markii xornimada la qaatay ka dib.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha: #219
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay gabayadii ay abwaanada Soomaalidu tiriyeen xiligii xornimo-doonka, kuwaas oo ay dadka ku guubaabin jireen
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #218
Barnaamijka Dhaqanka iyo hiddaha waxaan idinkugu heynaa qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaajaa oo todobaadkanna weli ku dhex jira suugaanta qiimaha leh ee ku xiriirta Calanka iyo gobanimadii Soomaalidu qaadatey 54 sano ka hor.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #217
Barnaamijkeena dhaqanka iyo hiddaha ee todobaadkan ayaa dhageystayaal waxaan ku soo qaadaneynaa calan saarkii calanka Somalia iyo qaar ka mid ah maansooyinkii loo tiriyay.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #216
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkan waxaan idinkugu heynaa qeyb kale oo ka mid ah Hiddihii Martida iyo Marti soorka Soomaalidii hore
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #215
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay Hiddihii Martida iyo Marti soorka Soomaalidii hore
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #214
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee Toddobaadkan #214
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha: #213
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay "Dulqaad yaraanta" oo dadka qaar sheegaan inay tahay arrin ay dadka Soomaalida ahi leeyihiin, waxanad ku maqli doontaaan tusaalayaal suugaanta Soomaalida ku jira.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha: #212
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay suugaantii laga tiriyo halgankii SYL oo la aas-aasay 15kii May 1943, ururkaas oo xornimada u horseeday dalka Somalia.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha: #211
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay maansooyinka "digashada" ee ay suugaanyahanadii hore tirin jireen markii qof ama koox ay col yihiin ay dhibaato ku habsato.